Taariikhda My Butros » 5 Waxyaabaha caanka ah ee anaga bari kartaa oo ku saabsan xidhiidhkooda
Last updated: Oct. 28 2020 | 2 min akhri
Warka ee "bachelor xaqiijiyay" George Clooney sida degdeg ah ugu fiday sida dab wax dufan jikada ah; la yaab leh ummadda, iyo siinta haweenka adduunka oo dhan ray rajo.
Waxaa la "xaqiijiyay": Qurux George waxaa is guursan!
Waa kuwee aado si uu u cadeeyo go'an tahay cuqdad, taasina waa la daaweyn karaa.
Waxaa sidoo kale jiray waxyaalo kale waxaynnu ku baadhi doonaa halkan maanta ...
Maxaa yeelay, dhammaan ay glitz, soo jiidashada, lacag, iyo ammaanta, marka ay timaado shukaansi iyo weheshiga, waxaa jira hal wax oo aan la diidi karo ka: Xiddigo waa sida dadka kale oo naga mid ah.
Taasi waa xaq. Akhyaarey Kuwaasu waa inta badan waxaan sanam samayn oo u Damcaynin inuu noqdo sida, halgan kula qaar ka mid ah arrimaha la mid ah iyo caqabadaha sida noo "dadbaa."
Waxyaabaha sida nabad-gelyo xumada, ilmaha riwaayadaha mama, cabsi ah, jahwareer, iyo gaalnimo,– la magacaabo wax yar. Caddeyso jacaylka waa barbaraha kama dambaysta ah.
Halkan Faraqa ugu weyn?
The arrimaha shakhsi ahaaneed ee caanka ah ayaa la baadho, dhaleeceeyay iyo ciyaartooydii masraxa qaran, la daawado dadweynaha.
Sida oo kale, waxa halkan ku casharada yar aan ka baran karno ay aad uga muuqan "doorar" iyo romances.
Hel qalin-aad diyaar u.
1. Gaalo ma aha had iyo jeer ku saabsan "naag kale" iyagoo prettier ama keeno oo dheeraad ah si miiska. Nasiib darro, guys had iyo jeer uma "ganacsan up."
Tixgeli qurux badan, tayo leh, ku dhammaan keentay Mudanayaal ee Hollywood iyo tirooyin dadweynaha kuwaas oo la soo waramayaa khiyaameeyay on: Halle Berry, Sandra Bullock, Jennifer Anniston, Maria Shriver. Waxa aynu halkan ku baran kartaa? Gaalo waa badan oo ku saabsan arrimaha qofka kale ee aan ahayn qofka la khiyaameeyay on. Ha u qadhaadhayd, si fiican u noqon.
2. Money had iyo jeer ma iibsan kartaa farax. Baadhitaanada tirakoobyada ayaa muujinaya in mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee furitaanka ee America waa lacag. Weli, ee Hollywood, halkaas oo waawayn ay caanka ku leeyihiin lacag caddaan ah in ka badan inta badan oo naga mid ah abid arki doonaa in uu nool yahay, weli waxaa jira "dhibaato jannada." Waxaan akhrin headlines todobaadle ah oo ku saabsan xad-gudub, muranada awoodda, dhaqanka la qabatimo, carada, iyo gaalnimo,. Waxa kaliya tagaa si ay u muujiyaan barwaaqo oo aan had iyo jeer saamayn ku farax.
3. Age farqiga ma aha inuu ahaado a "jabiyaha heshiis."Fiiri Jennifer Lopez oo iyada cutie muyuusiga, Casper. Waxaa ku saabsan oo faafta da'da 20-sano ku labo this, laakiin waxay u muuqataa in la fabulously uga hesho. Dhab ahaantii, waa dhif iyo naadir in la arko JLO aan dhoola wejiga saartay oo maalmahan. Waxaad tegi gabar!
4. Iskaabulo Xaqiijiyay yeelan karaan isbeddel ah ee wadnaha.
Mararka qaarkood waxay qaadataa naagtii waxay xaq u. Mararka kale, waqtiga noqon kartaa arrin weyn. Marna ha odhan.
5. "Haddii ay marka hore wax kuu qabsoomin, isku day mar kale. " In kastoo yar oo naga mid ah ayaa raba in ay la kulmaan warejin ah ee la-hawlgalayaasha iyo kulan kooban oo aynu markhaati ka xiddigaha qaar ka mid ah, waxaa jira wax in la sheegay in loogu talagalay adaygga shucuurtiisa iyo Iimaankooda in ay qori karaa "dhammaaneysa faraxsanahay" in sheekooyinka jacaylka shakhsi ahaaneed, by hartay u furan jecel. Tusaale ahaan, dadka caanka Steve Harvey sida, Jennifer Lopez, Elizabeth Burton, iyo Demi Moore ayaa socon gamcihiisa in ka badan muddo ama laba. Falsafada ay la wareegay? Ugu dambayntii, waxa uu ku xidhnaan inuu ku soo shirtagi.
Waxaa aad u leedahay.
Stars noo cayaaree. Mararka qaarkood waxay na baraan karaan. Kuwani shan casharo si gaar ah u adeega; waayo, sababtan. Waxaan oo dhan u digtoon waa in.